I-AOC ibhengeza ngokusesikweni uXhaso lwee-Esports kwiG2 Esports | Iindaba zeGajethi
Namhlanje, imidlalo ye-e iyaqhubeka nokuzuza umhlaba kwihlabathi liphela kwaye ukuze yonke le nto isebenze, ifuna abantu abaqeqeshiweyo kunye namaqela abaququzeleli ukuba benze umsebenzi onzima. Njengayo yonke into namhlanje, ukuba nenkxaso elungileyo kubalulekile ekusebenzeni kakuhle kweqela kwaye kule meko i-AOC, ingena kwinkxaso mali ye-G2 Esports.
I-G2 Esports, yazalwa kwi-2013 emva kokuba umdlali oqeqeshiweyo uCarlos "ocelote" uRodríguez wayiseka. I-G2 Esports yakhawuleza yaziseka njenge-titan yemijikelezo yaseYurophu kwiminyhadala eyahlukeneyo yezemidlalo., enerekhodi enomtsalane kunye nezihloko ezingama-79 eziphumeleleyo.
Isiteyitimenti esisemthethweni se-AOC senziwe ngu UMlawuli weNtengiso kunye noLawulo lweShishini lwe-AOC yaseYurophu, uStefan Sommer, kwaye koku uyacacisa ukuba banelisekile kakhulu kukuba babe ngabaxhasi beG2 Esports:
Ukusebenza namaqela e-esports akumgangatho wehlabathi kuyasikhuthaza xa kufikwa kuyilo lwemveliso yokucinga kwaye kusinceda sazi ukuba zeziphi iiseti zezinto ezifanelekileyo kuhlobo okanye isihloko. I-G2 ibonelela ngezixhobo zoqeqesho ezigqwesileyo kunye neemeko ezintle kubadlali bayo, ngenxa yoko asinakulinda ukufikelela kulindelo ngothotho lwethu lwe-AGON.
UCarlos “ocelote” Rodríguez, umseki kunye neCEO yeG2 izimvo:
Wonke umntu kwii-G2 Esports wonwabe kakhulu ngentsebenziswano ne-AOC. Ukubandakanyeka kwabadlali abaziingcali ekukhuliseni eyona midlalo ibalulekileyo kubalulekile kwaye sonwabile ukubeka iinkwenkwezi zethu kwihlabathi liphela ukunceda i-AOC ifezekise. Siyaqonda ukuba iprimiyamu ye-AGON yePrimiyamu ye-AG251FZ ngereyithi yokuhlaziya ekhawulezayo iya kuba yinxalenye ebalulekileyo yendawo yethu yoqeqesho. Siyazi ngcono kunaye nabani na ukuba italente ngaphandle kokusebenza nzima kunye nokuziqhelanisa nayo ayinaxabiso. Asithandabuzi ukuba oku kuzimisela nokuzimisela ukuba kokungcono kuya kukhokelela kwimpumelelo ngo-2018. Amaqela ethu alambile kunanini na kwaye sonwabile kakhulu ukuba namaqabane akholelwa kumnqweno wethu kwaye ahlala ekulangazelela ukusinceda ukuba siqhubele phambili.
I-G2 Esports ihlonitshwa kungekuphela nje kwimpumelelo yayo kwiiligi zamanye amazwe nakwiitumente, kodwa nangokuhlala zidibanisa italente ekumgangatho wehlabathi kwinqanaba ngalinye, ezi ziyi-League of Legends, CS: GO, Hearthstone, PUGB okanye Rocket League. Ngoku ukufika kwale nkxaso kulindeleke ukuba impumelelo ephumeleleyo iqhubeke ikhula kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ngenxa yemidlalo yokudlala ye-AOC, Okwangoku zezona zikhawulezayo ukwenziwa. NgoFebruwari, i-G2 Esports yaseka iqela le-CS: GO esele yaziwa njenge "qela laseFrance eliphambili" Babambe iindebe ezishushu ezikhuphisanayo kwi-2017 DreamHack Masters kunye ne-ESL Pro Series Season 5- bonke ngaphandle kuka-2017 ingunyaka wabo wokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-AOC ibhengeza ngokusesikweni inkxaso-mali ye-esports kwihlabathi liphela nge-G2 Esports